केन्द्रीय युनिफाइड हस्पिटलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा डा.जागेश्वर गौतम • Health News Nepal
काठमाडौं, १० जेठ २०७८
कोभिड १९ उपचारका लागि बनाइएको केन्द्रीय युनिफाइड हस्पिटल (वीर अस्पताल)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्राडा जागेश्वर गौतमलाई दिने निर्णय भएको छ।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्राडा. गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका प्राडा. गौतम अहिले स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारीमा छन् ।
‘केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा मलाई नियुक्ती गरियो भन्ने जानकारी पाएको छु । चिठी आइसकेको छैन् । तर जिम्मेवारी आएपछि आफू पछि हटने कुरा छैन् । सम्भवत भोलिबाट नै नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेछु,’ डा. गौतमले भने ।
सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उचपार गर्ने केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालको रुपमा परिवर्तन गरेको छ ।
Tags: #Health and population ministryBir HospitalCorona Virus #Covid19Dr.jageshor gautamUnified Hospital